दस्तावेज – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । बीमाको प्रचलनको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा ई.पू. ३ हजार वर्ष अघिको बेबोलोनिया र सुमरमा पुग्नु पर्नेहुन्छ । यी दुवै स्थान अहिलेको इराकमा पर्दछन् । त्यसबेला यी दुई राज्यका व्यापारीहरुले जहाजमा हुने चोरी, डकैती तथा अन्य क्षतिबाट बच्नका लागि सामूहिक रुपमा कोषको निर्माण गरेका थिए । त्यही कोषबाट यस्ता जोखिमहरुको क्षतिपूर्ति गर्दथे । यही
नेपालको बैंकिङ इतिहास : कुन बैंकले सुरु गरे कस्तो सेवा ?
बैंकिङ खबर । नेपालमा ८० वर्ष लामो बैंकिङ इतिहास छ । विश्वमा सबैभन्दा पहिला सन् १४७२ मा इटलीमा संसारकै पहिलो बैंकको स्थापना भएको थियो । बान्सा मोन्टे डीपस्सी डी सीना विश्वकै पहिलो बैंक हो । नेपालमा वि.सं. १९९४ मा पहिलो बैंकका रुपमा नेपाल बैंकको स्थापना भएको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट पहिलो बैंकका रुपमा नेपाल अरब
दिलु कार्की, बैंकिङ खबर । २१ स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पहुँच पुग्न बाँकी रहेको छ । ७ सय ५३ स्थानिय तह मध्ये हाल सम्म ७ सय ३२ स्थानिय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिसकेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षमा ७ वटै प्रदेश मध्ये सबै भन्दा बढी प्रदेश नम्बर १.
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुका साथै लघुवित्तको मर्जरलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने गरी प्रोत्साहन गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राख्दै समय थप गरिएको छ । कर्जा एवम् स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही पुरानै व्यवस्थालाई यथावत
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशत रहेको छ भने एघार महिनाको औसत मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशत रहेको छ । आयातको वृद्धिदर भने १७.३
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका बैंकहरुको लागि तनावपूर्ण रह्यो । एक पछि अर्को गर्दै बैंकहरुले तनावपूर्ण अवस्थ झेल्दै नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई स्वागत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बैंकहरुमा निक्षेप, तरलता, व्याजदर, व्याजदरको अन्तर लगायतमा एकपछि अर्को गर्दै संकट देखाप¥यो । त्यसपछि, सहुलियतपूर्ण कर्जा, भूकम्पपीडित कर्जा लगायतका विभिन्न
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि यस्तो छ धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले आ.ब. २०७४।७५ देखि प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस्तो छ, बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमः १. नेपालको आर्थिक स्थिति आव २०७५।७६ मा वाह्य क्षेत्र बाहेक नेपालको
बैंकको मर्जर र एक्विजिशनबारे राष्ट्र बैंकको नीति (पूर्ण पाठसहित)
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले २०७३ सालमा मर्जर र एक्विजिसनसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । नीति कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ती प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । जसमध्ये १२३ वटाको इजाजत खारेज भई कुल ४२ संस्था कायम भएका छन् । उक्त नीतिले
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय विवरणमा सबैजसो सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मूल्यवृद्धि, व्यापारघाटा, चालु खाता घाटा र शोधानान्तर घाटा बढेको छ भने वैदेशिक लगानी र विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेको छ । रेमिट्यान्स
धितोपत्र बोर्डले थाल्यो नयाँ नीति तथा कार्यक्रम निमार्ण प्रकृया
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम निमार्ण कार्य शुरु गरेको छ । बोर्डले नयाँ आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम निमार्णका लागि मंगलबार शेयरबजारका लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवासायी, मर्चेन्ट बैकर लगायतका सरोकारवालालाई बोलाएर सुझाव संकलन गरेको हो । छलफलबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने
नेपालका बैंकहहरु : कसले रचना गरे कस्तो इतिहास ?
कुन स्थानीय तहले कति पाए बजेट ?(सूचिसहित)
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहले तीन खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । जसमध्ये, प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहहरुलाई दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हेरौँ कुन प्रदेश र स्थानीय
बैंकिङ खबर / नेपालमा लगभग ८५ वर्ष पहिले नै सिक्काको प्रचलन सुरु भएको थियो । वि.सं. १९९४ मा नेपालको पहिलो बैँकको रुपमा नेपाल बैँकको स्थापना भइसकेको थियो । त्यस्तै, वि.सं. २००४ मा नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात भइसकेको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैँकको स्थापना भएको थियो । नेपालको बैँकिङ इतिहास ज्यादै लामो नभएता
कस्तो आयो बजेट ? (हेर्नुहोस् बुँदा बुँदामा)
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नौ खर्ब ५७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालू र चार खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ६०
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध : एक सिक्काका दुई पाटा
बैंकिङ खबर / बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रिय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रिय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा